यस्तै हो भने कांग्रेस अव इतिहासको विषय बन्ने भयो- प्रचण्ड (भिडियो) | mulkhabar.com
यस्तै हो भने कांग्रेस अव इतिहासको विषय बन्ने भयो- प्रचण्ड (भिडियो)
July 23, 2018 | 3:27 pm 124 Hits
काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको ४० औं स्मृति दिवसमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डा. गोविन्द केसीको अनसनको बलमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेकोमा चर्को आलोचना गरेका छन् ।
एउटा डाक्टरलाई मोहोरा बनाएर कांग्रेसले राजनीति गरेको आरोप प्रचण्डले लगाए। ‘दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई कम्तीमा तीन वर्ष ढुक्कले काम गर्न दिने चलन भए पनि चार महिना नबित्दै तोडफोड शुरु भइसक्यो,’ उनले भने। सरकारी डाक्टरलाई उपचार गर्न दिन्नँ भनेर कांग्रेसले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको दाबी पनि गरे।
‘लोकतान्त्रिक भनिने तत्व केसीको हत्या गरेर लासको राजनीति गर्न चाहन्छ’, कार्यक्रममा कांग्रेसप्रति आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका प्रचण्डले भने, ‘के कांग्रेससँग राजनीति गर्ने अन्य सबै मुद्दा सकिएका हुन?
नेपाली काङ्ग्रेस को राजनीतिक यात्रा अब गोबिन्द के सि को पुछर समात्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको हो ??? क.प्रचण्ड
Posted by नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी on Monday, July 23, 2018
सरकार डा. केसीसँग वार्ता गर्न लचकताका साथ प्रस्तुत हुने भन्दै उनले डा. केसीको आन्दोलन कुनै नौलो कुरा नभएको बताए। ‘अहिले डा. गोविन्द केसीले पहिलोचोटी अनसन बसेको होइन, लोकतान्त्रिक भनेको सरकार हुँदा सबैभन्दा बढी बसेका छन्’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘गोविन्द केसीको अनसन नेपाली समाजले पचाइ सकेको छ।’डा. केसी सरकारको वार्ता हुन्छ र सहमति हुन्छ भन्ने कुरासमेत जनताले थाहा पाइसकेको उनको भनाइ थियो।